भेन्डिङ मेसिन प्रयोग गर्ने, कर्णालीकै पहिलो विद्यालय – Rara Khabar
भेन्डिङ मेसिन प्रयोग गर्ने, कर्णालीकै पहिलो विद्यालय
सुर्खेत, १७ श्रावन ।
विद्यालयमा एसओएस हर्मन माइनर विद्यालय सुर्खेतले छात्राहरुको लागि स्यानेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन जडान गरेको छ । महिनावारीको समयमा उनीहरुको पढाईमा असर पर्न नदिन भेन्डिङ मेसिन जडान गरिएको विद्यालयले बताएको छ ।
शुक्रवारदेखि संचालनमा आएको भेन्डिङ मेसिनबाट दुई र पाँच रुपैंयाको सिक्का हालेपछि प्याड निस्कन्छ । विद्यालयका छात्राको लागि संचालन गरिएपनि शिक्षिका, एसओएस बालग्रामका आमा र अन्टीहरुले पनि प्याड प्रयोग गर्न गर्नेछन् ।
छात्राहरुको लागि आधुनिक सुविधायुुक्त स्यानेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन संचालन गर्ने हर्मन माइनर कर्णाली प्रदेशकै पहिलो विद्यालय पनि बनेको छ ।
विद्यालयले स्यानेटरी प्याड मेसिन जडान गरेपछि आफुहरु निकै सहज हुने छात्राहरुले बताए । अव म्याडमहरुसँग प्याड मागिरहनु पर्दैन्, उनीहरुले भने ।
महिनावारीको वेला छात्राहरूले शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर महशुस गर्ने भएकोले उनीहरुलाई सहज वातावरण दिएर पढाईमा सघाउन मेसिन संचालन गरिएको विद्यालयका प्राचार्य जगदिश ढकालले बताए । एउटा प्याडको ८ रुपैया पर्छ, उनले भने, विद्यालर्थीले दुई र पाँच रुपैयाको सिक्का राखेर प्याड प्रयोग गर्ने भएकोले वाकी खर्च विद्यालयले व्यर्होछ । महिनावारी हुँदा ढुक्कसँग विद्यालयमा आउने र पढने वातावरण सृजना हुने उनले बताए ।
विद्यालयमा ६ देखि १२ कक्षामा अध्ययनरत दुई सय ४० जना किशोरीहरुले सहज रुपमा मेसिनको प्रयोग गर्ने सहायक प्राचार्य हरिहर बस्नेतले बताए । छात्राहरुलाई विद्यालयले पहिला पनि प्याड उपलव्ध गराउथ्यो, उनले भने, म्यामहरुसँग माग्नु पर्ने भएकोले प्रभावकारी हुन सकेन् । अब चाहिएको वेला प्याड प्रयोग गर्न उनीहरु स्वतन्त्र छन् ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले मेसिनले छात्राहरुको पढाईमा सघाउने बताए । सवैले महिनावारी समस्यालाई हल्का रुपमा लिएको पाइन्छ डा. केसीले भने, महिलाहरुको शारीरिक र मानसिक विकाससँग जोडिएको मुद्धालाई गम्भिर रुपमा लिनु जरुरी छ । अनि मात्र हामीले परिकल्पना गरेको समानताको अधिकार र समृद्धिको सपना पुरा हुन्छ ।
देशकै उत्कृष्ट विद्यालय मध्येको एक हर्मन माइनर सुर्खेतले भेन्डिङ मेसिन राखेर आफुलाई अझ अव्वल बनाएको बीरेन्द्रनगर ४ का वडाध्यक्ष निलकण्ठ खनालले बताए ।
एसओएस बालग्राम सुर्खेतका निर्देशक मुकुन्द्र कुमार गिरीले मेसिनको प्रयोगबाट छात्राहरुको शैक्षिक सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । निर्देशक गिरीले यो मेसिनलाई कर्णाली प्रदेशका सवै विद्यालयमा जडन गरेर महिनावारीको समयमा विद्यालय नआउने छात्राहरुको पढाईमा सहज बनाउन सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
सरकारले सवै विद्यालयमा यो मेसिन जडान गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीता शर्माले बताइन् ।कर्णाली प्रदेशका मात्र हैन, देशैभरीका विद्यालयमा स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था नहुँदा छात्रा महिनावारी भएको बेला विद्यालय आउँदैनन् ।
जसको कारण उनीहरुको पढाई छुट्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यो मेसिन सवै विद्यालयले संचालन गर्न आवश्यक रहेको विद्यालयको भनाई छ । विद्यालयले भेन्डिङ मेसिन जडान गर्नुको साथै महिनावारी हुँदा छात्राहरुको लागि आराम गर्ने कक्ष पनि बनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १५:३४